पलेँटीमा गीतकारका गीति-गुञ्जनसँगै तीन वटा पुस्तक विमोचन हुने | Kendrabindu Nepal Online News
काठमाडौं । यो महिनाको ‘पलेँटी शृङ्खला’ विगतका पलेँटीभन्दा भिन्दै प्रकृतिको हुने भएको छ । अँग्रेजी महिनाको अनितम सातामा आयोजना हुँदै आएको सो सांगीतिक कार्यक्रममा यसपाली तीन जना साहित्यकारहरू सहभागी हुने भएका छन् ।
आफ्ना नयाँ प्रकाशीत पुस्तकका साथ पलेँटीमा प्रस्तुत हुने तीनै जना साहित्यकारहरू गीति साहित्यमा पनि स्थापित व्यक्तित्व हुन् । त्यसैले यसपालीको पलेँटी संगीत र साहित्यको संगम हुने जानकारी आयोजक संस्था नेपालयले जनाएको छ ।
सांगीतिक पलेँटी विगत केही महिनादेखि तीन दिन आयोजना हुँदै आएको छ । यसपाली पहिलो दिन, असोज १० गते (२७ तारिख) शुक्रबार, कवि तीर्थ श्रेष्ठ प्रस्तुत हुनेछन् । कार्यक्रममा तीर्थ श्रेष्ठले सृजना गरेका गीत, कविता बारे चर्चा र उनीसँगको अन्तरसंवाद पनि प्रस्तुत हुनेछ । कवि तीर्थले रचना गरेका गीत गायक फत्तेमान लगायत नयाँ पुस्ताका गायक, गायिकाले स्वर दिएका छन् ।
उनको चर्चित कविता ‘हिउँमा लेखिएका नाम’ पनि संगीत वद्ध भएको छ । उनका धेरै जसो गीतमा संगीतकार आभासले धुन भरेका छन् । तिनै गीतको सांगीतिक माहोलमा कवि श्रेष्ठको नयाँ कृति ‘धर्सैधर्साको चक्रव्यूह’ सार्वजनिक हुनेछ । नव प्रकाशित कृतिमाथि निबन्धकार रोशन शेरचनको संक्षिप्त मन्तव्य रहेनेछ । सो अवसरमा कवि श्रेष्ठले नयाँ सँग्रहमा संकलित केही र केही पूराना कवितासमेत वाचन गर्नेछन् ।
‘जीवन यात्राको यो क्षणमा आएर आफ्नो नयाँ कृति प्रकाशित गर्न पाउनु उसै आनन्दको विषय हो; त्यसमा पनि सांगीतिक उत्थामना क्रियाशील पलेँटीको मञ्चबाट यसलाई सार्वजनिक गर्ने अवसर जुर्नु अर्को उच्च आनन्दको विषय हो ।‘ आउदै गरेको कृति र पलेँटीबारे कवि तथा गीतकार तीर्थ श्रेष्ठको प्रतिक्रिया थियो ।
त्यसैगरि असोज ११ गते (२८ तारिख) शनिबारको पलेँटीमा कवि तथा गीतकार कालीप्रसाद रिजाल प्रस्तुत हुनेछन् । साहित्यकार रिजालको नयाँ कृति ‘काँडामा हाँसेको जिन्दगी’ पनि पलेँटीको सांगीतिक माहोल बीच सार्वजनिक गरिने भएको छ । सो अवसरमा रिजालसँग पनि उनको गीति लेखनको यात्रा र नव प्रकाशित पुस्तकका सन्दर्भसँग सम्बन्धित रहेर अन्तर संवाद गरिने कार्यक्रम रहेको छ । रिजालको नयाँ कृति र उनको गीति लेखनमा केन्द्रीत रहेर समालोचक रजनी ढकालले मन्तव्य व्यक्त गर्नेछिन् ।
नारायण गोपालले गाएका गीत ‘केही मीठो बात गर‘, ‘यसैगरी बिताइ दिन्छु‘, ‘आँखा छोपी नरोऊ भनी‘, गायक फत्तेमानले स्वर दिएको ‘बनै खायो डढेलोले‘ जस्ता रिजालका अनगिन्ती गीतहरू नेपाली गीति साहित्यका कोसेढुंगा सावित भएका छन् । रिजालको पलेँटीमा यी चर्चित गीतका साथै केही नयाँ गीत प्रस्तुत हुनेछन् । कार्यक्रममा पुस्तकको शीर्षकसँग निकटता राख्ने गीत ‘झर्‍यो जिन्दगी फुट्यो जिन्दगी’ (काँडामा हाँसेको मीठो जिन्दगी’) पनि प्रस्तुत हुनेछ ।
वि. सं. २०२१-२२ सालताका चर्चा कमाएको ‘राल्फा’कालभन्दा पहिलेदेखि नै गीत लेखनमा लागेका कवि मञ्जुलले अनगिन्ती गीत लेखेका छन् । उनको गीति लेखन र सांगीतिक कार्यक्रमको उद्घोषण वि. सं. २०३६ ताका निकै चर्चित थियो । उनको तत्कालिन समयको गीति लेखन र प्रस्तुतिले त्यसबेलाको बामपन्थी आन्दोलनलाई निकै टेवा पुर्‍याएको मानिन्छ ।
‘सम्झनाका पाइलाहरू’ सार्वजनिक हुने मञ्जुलको पलेँटीमा उनको त्यही विगतको सांगीतिक झलक समेटिने छ । कवि मञ्जुलको पुनःप्रकाशित पुस्तक र व्यक्तित्वमाथि उनीसँग विगतमा नजिकबाट संगत गरेका राजनैतिक व्यक्तित्व रघु पन्तले मन्तव्य दिनेछन् । मञ्जुलका गीतहरू ‘मेरो सानो मुरलीमा’, ‘भोकै मर्ने महाकविका पेटका सारङ्गी’, ‘कोशी छेऊ उभेको सिमल’ जस्ता पृथक शैलीका रचना मनिन्छन् । उनका अधिकांश गीतमा रामेशले धुन भरेका छन् । पलेँटीको सांगीतिक टीमसँग मिलेर मञ्जुल आफ्ना विगतका तिनै सांगीतिक रचनाहरू गुनगुनाउने छन् र विगतका क्षणलाई सम्झने छन् ।
‘पलेँटी मैले आनन्द लिने सांगीतिक थलो हो । त्यसकै मञ्चमा बसेर हाम्रो सांगीतिक यात्रा विवरण समेटिएको ‘सम्झनाका पाइलाहरू’ सार्वजनिक हुँदैछ । म एकदमै खुशी छु ।‘ मञ्जुलले पुनः प्रकाशित पुस्तक र पलेँटीका बारे एक सासमा प्रतिक्रिया दिए ।
‘पलेँटी गीति विधासँग बढी निकट कार्यक्रम हो तर यस महिनाको पलेँटीले संगीत र साहित्यलाई अझ प्रत्यक्ष रुपमा निकट बनाउन मद्दत पुग्नेछ भन्ने अभिलाषा लिएका छौं’ पलेँटीका संयोजक आभास भन्दै थिए । टिकेट कार्यक्रममा संचालन हुँदै आएको पलेँटीबाट पुस्तक सार्वजनिक गर्नु नौलो प्रयोग भएको कुरा पनि पब्लिकेसन्स नेपालयले जनाएको छ ।
यस कार्यक्रममा सहभागी हुनका निम्ति अनलाइन, फोन र ईमेलबाट टिकेट बुक गर्ने सुविधा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । त्यसकानिम्ति www.thuprai.com साथै [email protected] र ९८०३९१९२६६ मा सम्पर्क गर्न सकिने कुरा आयोजक संस्थाले जानकारी गराएको छ । यो महिनाको पलेँटी सँधै झैँ कालिकास्थान स्थित नेपालयको साबिककै कार्यक्रमस्थल ‘आर.शाला’मा प्रस्तुत हुनेछ ।
Prevराहुल चौधरी लगातार दोस्रो वर्ष शक्तिशाली ३५ व्यवसायीको सूचीमा
चलचित्र ‘रातो टीका निधारमा’ को पत्रकार भेटघाटNext